Uma ubheka ezibalweni dokhumenti, iningi kungenziwa kalula elakhiwe futhi wasebenzisa ukwaba idokhumenti - kuba bill. Nokho, kufanele kulandelwe ukuma jikelele idokhumenti, okwakuyoholela zigunyazwe umthetho futhi okuyinto ngokuqinile, akukho. Ngakho, lo mthethosivivinywa - idokhumenti lapho umdayisi uthi kumthengi ezingaba intengo izimpahla zabo. Umthengi, ukukhokha lemali kukhonjisiwe invoyisi, umphakeli amukela izimo futhi asebenzise le-akhawunti uma ukhokha. Umthengisi futhi uthembisa lokhu ngomkhumbi izimpahla elicacisiwe umthethosivivinywa, noma enze inkonzo uma kwenzeka lokukhokha ngesikhathi esifanele.
Nokho, kukhona imininingwane eminingana saziso ezifaka invoyisi. Okokuqala, kuba inombolo ye-serial. Namuhla, cishe bonke inhlangano ekuziphatheni ezimali isebenzisa izinhlelo ezikhethekile. Basuke ngokuzenzakalelayo eyabelwe inombolo ye-akhawunti. Kusukela ekuqaleni unyaka ngamunye, ama-akhawunti kwezinamba kumamenyu kuqala kuphawu kabusha. Izinombolo babelwa ukuze kalula akwazi ukukhomba idokhumenti, ebhekisela inombolo kanye nosuku. Okwesibili, usuku - lena akhawunti zasesiteji saziso esilandelayo. Ngokuvamile umdayisi icacisa kuwo, ngalokho nkathi yesikhathi idokhumenti sivumelekile, ngakho-ke, kukhonjisiwe usuku invoyisi kubaluleke kakhulu. Okwesithathu, lo mthethosivivinywa kumele aqukethe zonke imininingwane yasebhange umphakeli edingekayo yokuyikhokhela. Ngempela, injongo invoyisi - irisidi yokukhokha izimpahla, futhi wenze inkokhelo ngaphandle idatha ku -akhawunti isiphetho lomthengisi kanye ebhange lapho ivuliwe, akunakwenzeka. Ngokuhamba kwesikhathi ngempela ibonisa igama izimpahla ahlinzekwa noma amasevisi, amanani abo kanye nobungako. Futhi, kubalulekile ukuba kuhlinzeke imininingwane ngokufinyelela kwi iphesenti ukubaluleka intela ukwengezwa noma ukuntuleka kwayo. akhawunti zasesiteji Kugcine isibopho sokuba yokukhokha - isignesha lowo muntu odala ukuphakanyiswa kwakhe.
Ngaphezu kwalezi imininingwane, i-akhawunti ingaqukatha eziningi ezengeziwe lula ukusebenzisana umphakeli kanye umthengi. Ngokwesibonelo, inombolo yocingo contact, thwebula ikheli kanye ikheli ehhovisi lapho imibhalo zikhishwa. Ngokuhamba kwesikhathi, ungase ucacise ukuthi kumele abe ummeleli umthengi khona ukuthunyelwa. Ngokuvamile, lokhu - umyalo wokukhokha kuphawulwa yasebhange nokwenza kwayo, eliqinisekiswe yi-isitembu yasekuqaleni isiginesha sivumelwano olandelwayo ethengisa intengo umkhiqizo noma isevisi, amandla ommeli ukuthola ingcebo , njll
Umthengi ngomlomo noma ngokubhala kungenzeka ubacele ukuba ubeke amaphuzu umkhiqizo noma isevisi kusengaphambili. Nokho, kuleli cala, i-imvoyisi yokukhokha akusho inkokhelo saziso kuso. I-Akhawunti kungaba ulwazi endalweni - kubalulekile ukuqaphela umthengi bezikhali amanani zamanje ngosuku invoyisi. Umphakeli, yona, insured wokulwa enkingeni kungenzeka yokukhokha ku-akhawunti isikhathi eside ngemuva kokuphakanyiswa yakhe, ukukho dokhumenti, kungase kube esebenzayo okwesikhathi esithile.
I-akhawunti kungenziwa kushiwo ukuthi umthetho olandelwayo intengo ukuxoxisana. Kulokhu, kufanele unikezwe indawo nesignesha umthengi kanye ukunyatheliswa. Uma Mthethosivivinyo ithunyelwa ikhasimende ifeksi, umthengi Umbukiso Wesithombe Sokusakaza yayo futhi kubeka isitembu yayo kanye nesiginesha kokuthola ikhophi. Lokhu bill kumele kudlule umphakeli lapho izimpahla ezithunyelwa.
Unikezele nge-invoyisi ukukhokha kungenzeka ikhanda kwenhlangano, accountant abakhulu noma omunye umuntu ogunyazwe oda ekhanda. Kufanele kuqashelwe ukuthi, ngokomthetho Russian, ukuphrinta - zasesiteji ozikhethela ukuba alandise yokukhokha.
Morse blackcurrant: iresiphi kanye indlela kulungiselelwa. Morse blackcurrant fresh
Njengoba okuningi njengoba sikadali inkukhu izinhliziyo?